Kungani iRimiliable B2B Commerce Iyindlela Kuphela Eya Phambili Kubakhiqizi Nabathengisi Thumela I-COVID-19 | Martech Zone
Ubhadane lwe-COVID-19 lubangele amafu okungaqiniseki kwezamabhizinisi futhi kwaholela ekuvinjweni kwemisebenzi eminingana yezomnotho. Ngenxa yalokhu, amabhizinisi kungenzeka abone ukuguqulwa kwepharadigm kumaketanga wokunikezela, amamodeli wokusebenza, indlela yokuziphatha kwabathengi, namasu wokuthenga nokuthengisa.
Kubalulekile ukuthatha izinyathelo zokubeka ibhizinisi lakho endaweni ephephile nokusheshisa inqubo yokutakula. Ukuqiniswa kwebhizinisi kungasiza kakhulu ekuzivumelaniseni nezimo ezingalindelekile nokuqinisekisa ukusimama. Ikakhulukazi kubadlali abasenkampanini yokuthengiselana yezohwebo ye-B2B, izikhathi ezingaqinisekile ezifana nalezi zingaletha i- ikati odongeni isimo. Ungahle ubhekane nokuwa emakethe noma ukuthole kunzima ukuhlangabezana nokwanda kwesidingo. Yize zombili lezi zimo zingakhathaza ngokulinganayo, abenzi nabasabalalisi bangathembela ekuqhubekeni kwebhizinisi elizwakalayo nasekuqiniseni ukubhekana nenselelo nokuqinisekisa ukutholakala okungaphazanyiswa kubhadane lwalesi silinganiso nesikali.
Isimo esikhona manje siphoqe osomabhizinisi ukuthi benze izinguquko ezakhiweni kumasu abo okuya ezimakethe. Nazi ezinye izindawo ezibalulekile ongagxila kuzo ezingakusiza ukuthi uqhubeke ngokuqhubekayo futhi wakhe amandla okuqina ngesikhathi senhlekelele yezempilo ebhubhisa kakhulu kuleli khulu leminyaka.
Disaster Lokubuyisela - Amabhizinisi kufanele alinganise umthelela wobhadane kumakhono okusebenza. Njengempendulo esheshayo, amabhizinisi amaningi asungule izikhungo zezinzwa zezentengiselwano ezinamaqembu asebenza ngokweqile ukunciphisa umthelela walolu bhubhane emisebenzini yokuthengisa. Benze nezinguquko ezinjengemibandela yezikweletu eguquguqukayo ukusekela abalingani babo besiteshi. Yize lezi zinhlelo zingasiza ukufeza izinhloso ezisheshayo, ukuhlela ngokucophelela nokwenza izinto kubalulekile ekutholeni isikhathi eside.
Indlela Yedijithali-Okokuqala - Ukuthengisa kwe-B2B kungenzeka kuguqulwe ngokuyisisekelo ezikhathini zangemva kwe-COVID-19 ngokugxila kugudluke kusuka kokungaxhunyiwe ku-inthanethi kuya kuma-digital mediums. Ubhadane lunikeze umfutho kwinqubo eqhubekayo yokuthengiswa kwedijithali. Njengoba amabhizinisi e-B2B abona ukwanda okukhulu kokuxhumana kwedijithali kungekudala, kufanele ubheke yonke imisebenzi yokuthengisa ukuthola amathuba akhona we-automation yedijithali. Ukuze uthuthukise ulwazi lwedijithali, qinisekisa ukuthi abathengi bangathola imininingwane ekulungele kuwebhusayithi, bese uqhathanisa imikhiqizo nezinsizakalo. Kumele futhi ulungise noma yiziphi izinkinga zobuchwepheshe ngesikhathi sangempela futhi ubheke izindlela ezintsha nezintsha zokuthuthukisa ulwazi lwamakhasimende.
Abahlinzeki Bacabangisisa Umdlalo Wabo - Abahlinzeki abanikezela ngomuzwa wedijithali onokwethenjelwa nowenziwe ngezifiso ngokugxila okwandayo kwejubane, ukwenza izinto obala, nobungoti kungenzeka batholakale ngokushesha futhi bakhulise amakhasimende abo. Kulokhu, kufanele usebenzise ubuchwepheshe futhi wethule izici ezilungele amakhasimende ezifana nezingxoxo ezibukhoma ezingasiza ukuqonda izidingo ezithile futhi uphendule ngokushesha. Ngaphezu kokusebenzisana kuwebhusayithi, abahlinzeki balindele ukwanda kwethrafikhi kuzinhlelo zokusebenza zeselula nasemiphakathini yezokuxhumana. Ngakho-ke, kokujwayelekile okusha, udinga ukwenza izinguquko ezinqala kucebo lakho lokuthengisa ukuze ukwazi ukuwasebenzisa ngokugcwele amathuba ku-landscape ebonakalayo.
Ukubambisana kwe-eCommerce neDijithali - Inkinga yamanje inikeza ithuba lokwandisa i-eCommerce yakho namakhono edijithali. I-eCommerce kulindeleke ukuthi idlale indima ebaluleke kakhulu esigabeni sokutakula nasesigabeni esilandelayo sokukhula. Uma ibhizinisi lakho lingenawo amandla edijithali, ungaphuthelwa ngamathuba angapheli kubuso be-inthanethi. Amabhizinisi we-B2B asevele etshale imali ekwakheni ukubambisana kwe-eCommerce nobuchwepheshe bedijithali angabheka ukuzuza ekunyuseni kwezinyawo ngokusebenzisa ama-mediums.
Ukuthengisa kude - Ukunciphisa umthelela ekuthengisweni, amabhizinisi amaningi e-B2B abone ushintsho oluya kumodeli yokuthengisa ebonakalayo ngesikhathi sobhadane. Ukugcizelelwa ekuthengiseni okukude nasekuxhumaneni nge-videoconferences, ama-webinar, nama-chatbots kukhule kakhulu. Ngenkathi amanye amabhizinisi ethembele ngokuphelele kuma-mediums abonakalayo ukumiselela ukuthengiswa kwensimu, amanye asebenzisa ochwepheshe bawo bokuthengisa ngokuhambisana nokuthengiswa kwewebhu. Iningi lithole iziteshi ezikude ukuthi zilingana noma zisebenza kangcono ekufinyeleleni nasekusebenzeleni amakhasimende. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kweziteshi ezikude kungenzeka kukhuphuke ngisho nalapho imikhawulo yezokuvakasha yehla futhi abantu bebuyela emsebenzini.
Enye indlela Sourcing - Ukuphazamiseka okukhulu ekuthengisweni kwezinto ngesikhathi seCovid-19 kugcizelele isidingo samabhizinisi sokuqalisa izinguquko kucebo lokuthengwa kwempahla. Ukuphazanyiswa kokuthengwa kwempahla kuphazamise ukutholwa kwezinto ezingavuthiwe kubathengisi abanenkontileka, ikakhulukazi ezimweni lapho kusetshenzwe khona izinto zokusetshenziswa emhlabeni jikelele. Ukunqoba le nselelo, amabhizinisi kudingeka abheke abathengisi bendawo ukuze bathole izinto zokusetshenziswa. Ukuvikela izinkontileka nabathengisi bendawo kungasiza ekugwemeni ukubambezeleka kokukhiqizwa nokusatshalaliswa. Kungasiza futhi kulesi sigaba ukukhomba eminye imikhiqizo nezinto zokwenziwa.
Ukuhlelwa kokuqhubeka kanye nokutshalwa kwemali kwesikhathi eside - Ekuthengisweni kwe-B2B, lesi yisikhathi esikahle sokondla umkhondo nokwenza ezinye izimali zesikhathi eside. Landela futhi ugcine ukuxhumana njalo namathemba asepayipini bese unquma amathuba wesikhathi eside. Bazise ngecebo lakho lesehlakalo kanye nezinyathelo ozozithatha ukuqinisekisa ukuqhubeka. Kancane kancane kuzodingeka ususe ukugxila kwakho ekuphenduleni okuphuthumayo uye kwimodeli yesikhathi eside yokuqina kokusebenza. Kule nqubo, zibandakanye ekuhleleni okuqinile kokufunda ukuze ufunde izifundo kule nkinga yamanje. Kumele futhi uhlole ubungozi bokusebenza emisebenzini ebucayi yebhizinisi futhi wenze izindlela zokuhlela izimo. Ukuthuthukisa amandla okusimama kungasiza ekubhekaneni nemicimbi engakaze ibonwe futhi kubuyele esimweni sokuqala sebhizinisi esinomthelela omncane ekusebenzeni.
Chaza Indima Entsha Yabathengisi Abathengisayo - Ukushintshela ekwenzeni i-digitalization akuthinti indima yabathengisi abadayisi manje okudingeka bajwayelane namathuluzi edijithali afana ne-Zoom, Skype, neWebex. Ochwepheshe bezentengiso abasebenza endaweni ye-B2B kumele baqonde amathuluzi ahlukahlukene aku-inthanethi ukubhekana nokuphendula imibuzo yamakhasimende ngempumelelo. Njengoba ulungiselela ukwanda kokuthengiswa kwedijithali, qonda ukuthi kungcono kanjani ukuqeqesha nokuthumela ochwepheshe bezentengiso kuziteshi eziningi ukuhlinzeka ngemisebenzi nokuxhaswa kwamakhasimende. Ukuqeqesha nokutshala imali kubasebenzi bakho nakanjani kuzovuna imivuzo ngokuhamba kwesikhathi.
Ungalindeli Ukuthi Ubhadane Luphele
Ochwepheshe basikisela ukuthi i-coronavirus ingahlala nathi isikhathi eside futhi iqhubeke nokusabalala kuze kuthuthukiswe umuthi wokuyiqeda. Njengoba izinhlangano zibheka ukwakha kabusha nokuqala ukusebenza kwazo ngabasebenzi abanomkhawulo nezinyathelo zokuqapha ezidingekayo, kubalulekile ukuvumelanisa yonke imisebenzi nezidingo ezintsha.
Amabhizinisi kufanele asebenzise indlela yokusebenza futhi alandele uhlelo olubekiwe lokuqinisekisa ukuqhubeka kokusebenza nokuvikela ukuphazamiseka kokuthengwa kwempahla. Gcina uhlu olukulungele futhi ulungiselele kusengaphambili ukuze ungaphuthelwa yithuba lokuthengisa. Njengoba ukuvuselelwa komnotho ezikhathini ze-post-COVID-19 kungashesha kunalokho obekulindelekile, kufanele usebenzise lesi sikhathi ukulungiselela ukufunwa kwe-pent-up. Khumbula, uma ungaqali manje, ungahle ungakwazi ukusebenzisa amathuba avelayo ngesikhathi esifanele.
Tags: ukufuna okunyeUkuhweba kwe-b2bukuhweba ngekhompiyutha kwe-b2bukuthengiswa kwe-b2bukuqhubeka kokuhlelai-covid-19ukubambisana kwedijithaliindlela eyidijithali yokuqalaukutakula izinhlekeleleukubambisana kwe-ecommerceukuvuselelwa komnothoyokusungulalogisticsimali yesikhathi esideabakhiqiziubhubhaneUkutakulaukuthengisa kudeabahlinzeki
Umkhangisi wedijithali kanye ne-hacker yokukhula, uRajneesh Kumar njengamanje uyinhloko yezokumaketha kwidijithali ePimcore Global Services. IPimcore yipulatifomu yebhizinisi elihlanganisiwe eliwina umklomelo lokulawulwa kwedatha eyi-master (PIM / MDM), ukuphathwa kwesipiliyoni somsebenzisi (i-CMS / UX), ukuphathwa kwempahla yedijithali (i-DAM), ne-eCommerce.